Creative Writing » တောင်းစားကြသူများ…. Beggar	24
ဒါတွေလည်းအတူတူပါပဲ…မကြာခဏတွေ့ရတတ်တဲ့ လိမ်တောင်းနည်းတစ်မျိုးပါပဲ… ……………………………………….
၀ယ်တိုက်လိုက်ရတာကိုလည်း ကျေနပ်မိတယ်….. ……………………………………
28 November at 11:38 • ကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြည့်မယ်၊ ဒီပုံလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖေ့ဘုတ်မှာ တော်တော်လူပြောသူပြောများနေတယ်။ အားလုံးရဲ့ သဒ္ဓါတရားကို ဖျက်လို၊ ဖျက်ဆီးလုပ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ ဒီပို့စ်ကိုရေးခြင်းမဟုတ်ပါ။
လူလိမ်လား၊ လူကောင်းလားဆိုတာ အကဲခတ်ကြစေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကတော့ မသင်္ကာပါဘူးခင်ဗျား။ </blockquote>
ဒီလိမ်နည်း ကို ကျနော် မနှစ်မြို့ဘူးဗျာ။ ဒီလိုလေးဗျောင်တောင်းတာကမှ သမဂ္ဂ၀င်တွေတွေ့ရင် ကူညီကြလိမ့်အုံးမယ် မင်းဒင်ရဲ့ သက်ခိုင်ထဲကပုံလေးပါ
ခင်ဇော် says: အဟက်။
Wow says: ဟေးးးးးးးးးးးးး ပျော်စယာဂျီးနော့…. ခံနေရတာ မဟုတ်သလိုပဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 18
kogyi mind says: ဒီပို့စ်ကိုဖတ်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ သူဋ္ဌေးကြီးဟာ တကယ်တော့ မသိလို့အလိမ်ခံလိုက်ရတာဆိုတော့ သူ့အားနည်းချက်က အယုံလွယ်တာပါပဲ၊ သတိထားပြီး တွေးခေါ်မှုကိုဦးစားပေးလိုက်ရင် လူလိမ်တွေနည်းလာမှာပါ။ ဆင်းရဲလို့ပဲလိမ်လိမ်၊ ချမ်းသာလို့ပဲလိမ်လိမ်၊ မစင်ဆိုတာ နည်းများမဆို စက်ဆုပ်စရာချည်းပဲမို့ အဲသလိုလိမ်တဲ့သူတွေဟာ လူယုတ်မာတွေချည်းသာဖြစ်ပါတယ်။
Yae Myae Tha Ninn says: ကောင်းလိုက်တဲ့ စကားလေးဗျ… ကိုကြီးမိုင်းက ဂဇက်ကမှန်း တနေ့က ဦးမိုက်ကို မေးရင်း သိရတာဗျ… မင်္ဂလာပါနော်… FB မှာ ကိုထွဋ်က အနော်ပါ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7172
kyeemite says: .ခင်ဇော်
.ပထမဆုံးအားပေးသူအဖြစ် ကျေးဇူးပါ..ရှယ်ပေးတဲ့ “ မောင်ရာဇာ” စတေးတတ်လေးလည်းကြိုက်တယ် .kogyi mind ခင်ဗျား…ကိုကြီးမိုင်း စတေးတတ်ကိုသုံးခွင့်ပြုလို့ရယ်..တကူးတကလာရောက်အားပေးလို့ရယ်
.ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3137
surmi says: ဒါမျိုးက များများရေးသင့် သတိပေးသင့်တယ်ဦးမိုက်ရေ ……
ဗုံဗုံ says: အောင်မယ်… ယောက်ခမွက
အဲ့တုန်းက သုံးသောင်းတောင်ပေးခဲ့တာဆို. သဒင်းကြားတယ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2374
aye.kk says: တော်သေးတယ်။
kai says: သောတာပန်တဦးဖြစ်တဲ့.. ပုဏ္ဏားက.. မြတ်စွာဘုရားပုရိနိဗ္ဗာန်ပြုလို့.. ဓာတ်တော်မွေတော်တွေကိုခွဲတော့.. မင်းညီမင်းသားတွေဝေစုမတည့်.. စစ်တိုက်ကြမယ်ဖြစ်တော့.. ဒိုင်လုပ်ပြီး..ခွဲဝေပေးတယ်..။ အဲ.. သူလိုချင်တာလေးတော့.. ကျန်သူတွေမသိအောင်အသာယူ”ဘတ်” ထားလိုက်တယ်..
နောက်ဆို ဘုန်းကြီးတွေများ တောင်းနေရင်.. လူကိုလှူတာမဟုတ်…သင်္ကန်းလှူတာဆိုပြီး.. ၀တ္တု(ငွေ)ကပ်လိုက်နော..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9257
ဦးကြောင်ကြီး says: လာဗျံပီ ဒီစဂါး… ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ၊ သာသနာဆိုတာ တဦးတဖွဲ့ပိုင် မမြည်ဘူး မာမွတ်ဘိုင်ရဲ့။။ ဒါကြောင့် စေတနာသန့်လျင် ခိုးတယ် စွတ်စွဲလို့မရ…။ သူများက စေတနာနဲ့ လုပ်ထားတာကို ဖျက်လိုဖျက်ဆီးစိတ်နဲ့ ဒါမှမဟုတ် တဦးပိုင်တယောက်ပိုင် လုပ်လျင်တော့ အပြစ်ရှိတယ်။ ဒါမှမဟုတ် မူလရည်ရွယ်ချက်ပျောက်ပြီး အများက တလွဲသုံးနေ.. ဥပမာဗျာ ရွှေတိဂုံစေတီကြီးကို သာသနာကွယ်ချိန်မှာ နှောင်းလူများ ပြတိုက်ဖွင့်စား အပန်းဖြေစခန်းလုပ်စားနေလျင် အထဲက ဓာတ်တော်မွေတော်တွေကို ဗင်ဂိုးပန်းချီကားလို့ အမြတ်တနိုး သိမ်းဆည်းထားလျင်တော့ ခိုးကောင်း ပြောင်းရွှေ့ကောင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပညတ်ဆိုတာ သူလဲပြော ကိုယ်လဲပြော ဖြစ်တာမို့ ပြောတဲ့အခါ ရှင်းပေမဲ့ တကယ် လက်တွေ့မှာ မရှင်းဘူး။ အလွဲသုံးနေသူတွေကလဲ သိသိနဲ့ဖြစ်စေ မသိလို့ဖြစ်စေ ငါတို့မှန်တယ် မွန်မြတ်တယ် ပြောမှာပဲ။ ခီများကို မသနားဘူး ငရဲကျမှာ.. သာမီးဒေါ်ဂလေး သန်ဆင်ခိုင်မ်ကိုတော့ ငရဲသားလောင်း သာမီးဖြစ်မှာ ယာဉ်နာဒယ်.. ဒါကြောင့် ဦးမာမွတ်ကို ဒီတသက် ယောက္ခမ အတော်ဗူး။ သန်ဆင်ခိုင်မ်လေးကို ခိုးပြေးမဲ..။
aye.kk says: သူကြီးက ပိဋိကတ်သုံးပုံ နှုတ်ငုံရထားတာမသိလို့ ပါနော…။
Yae Myae Tha Ninn says: အရင်တုန်းကဆို အနော်လဲ လှူတယ်ဗျ… တရက်ပေါ့…ကြည့်မြင်တိုင်ဘူတာကို တက်တော့ ရုတ်ကနဲ အနော့်ကို ဘေးက ဖြတ်ကျော်သွားတာ .. ပြီးတော့ အသိက သူ့ကို မြင်ဖူးတယ်ဆိုပြီး.. စဉ်းစားတယ်.. မရဘူး.. နည်းနည်းကြာတော့ လမ်းထဲကို အဘွားကြီးတယောက် သားလေးတို့ သမီးလေးတို့ရယ်ဆိုမှ… အော်.. လို့ သိသွားတယ်… တကယ်ပဲ လောကကြီး ပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်ဗျ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4670
ခင် ခ says: သဏ္ဍန်လုပ်သရုပ်တူပြုပြီး အနေချောင်လို့ အလှုခံနေကြတယ်ဘဲဆိုမလား တောင်းတယ်လို့ဘဲသုံးမလား အမျိုးမျိုးသောနည်းတွေနဲ့ အချောင်နှိုက်နေကြတာတွေပေါ့ဗျာ ကျွန်တော်လဲအဲလိုတွေနဲ့ကြုံရင် အခုနောက်ပိုင်းတော့ ကန်တော့သေးပါရဲ့လို့ဘဲ ပြောဖြစ်သဗျ။
Ma Ma says: တစ်ယောက်ထဲမြို့ထဲထွက်တုန်းက အ၀တ်နွမ်းနွမ်းနဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ဆေးရုံက ဆင်းလာတာ လမ်းစရိတ်မရှိလို့ မိန်းကလေးချင်းမို့ တောင်းရဲတာပါ ဆိုပြီး တောင်းလို့ တကယ်ပဲထင်ပြီး ပေးခဲ့တာ…..
kyeemite says: ဒီပို့စ်ရဲ့ ဆိုလိုရင်း ရည်ရွယ်ချက်က ဒါကိုပြောချင်တာပါပဲ..စိမ်းဗြဇေ မမရေ
လောကကြီးပျက်စီးသွားမှာစိုးလို့ဆိုတာလေး သဘောကျတယ်။ မင်းဒင်ရဲ့ သက်ခိုင်စာအုပ်ထဲ အဲ့အချက်လေးကြိုက်လို့ ပို့စ်တင်ဖြစ်သွားတာပါ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3552
ဦးဦးပါလေရာ says: အင်း…..
padonmar says: ပဒေသာပင်ကွယ်တယ်ဆိုတာ အဲသလိုလူတွေကြောင့်ပါ။
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: အာ့တွေက
ဦးကျောက်ခဲ says: အဟတ်စ်… အဲဂလို သနားအောင် ဇာတ်လမ်းဆင်ပြီးတောင်းတာတင်မက…
La Yeik says: မီးဆိုရင် ရွယ်တူတန်းတူနဲ့ ကလေးတွေဆို လှူ ဘူး…အဖိုးအဖွားတွေဆိုရင်တော့ ပိုက်ဆံမပေးဘူး…ဘာစားမလဲမေးပီး ၀ယ်ကျွေးလိုက်တာပဲ….
CharTooLan says: အာ့မျိုးတွေပြောရင်နော် … မဟာဂရုဏာရှင် ခလုတ်တဂျောက်ဂျောက်နှိပ်သူတို့က
နောက်… … … နောက်……. … လေဘာဒယ် အူးမိုက်ရယ်…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1292
uncle gyi says: သူဟာသူထိုင်တောင်းတောင်း
kyeemite says: .ကိုယ့်ပါတ်ဝန်းကျင်မှာအမှန်တကယ် အကူအညီလိုအပ်နေသူတွေတွေ့ရင်တော့ .ထိရောက်အောင်ကူညီပါတယ်…ဒီလိုလိမ်ဆင်တွေကိုတော့အားမပေးချင်ပါဘူး
.၀န်ရောက်ကွန်မန့် ချီးမြှင့်ကြသူ အားပေးဖတ်ရှုသူအပေါင်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ကျွန်မ ကတော့ အောက်ခြေက ဆင်းရဲသား သူတောင်စား တွေ များလာတာ ပိုပိုဆိုးလာတာ မဆန်းပါဘူး လို့ ဘဲ ပြောချင်တယ်။
ရှိရောရှိရဲ့လားတောင် မသိ။ လွဲ သွားရင် စောဒီးပါ ကကြီးမိုက် ရှင့်။